Semalt विशेषज्ञले कसरी मेशिन लर्निंग र कृत्रिम बुद्धिमत्ताले SEO प्रभावलाई असर गर्छ भनेर वर्णन गर्छ
गुगल जस्ता खोज इञ्जिनहरूले एक आगन्तुकका लागि सबै भन्दा सान्दर्भिक खोज परिणामहरू वितरण गर्न कृत्रिम बुद्धि र मेशिन लर्निंग प्रयोग गर्दछ। गुगल खोजी एल्गोरिथ्म कसरी काम गर्दछ? किन तपाईंको साइट रैंकिंग असफल भयो? यी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हुन् जुन साइटको मालिकले वेबसाइटलाई श्रेणीकरण गर्नु अघि सोध्नु पर्छ।
दिमागमा राख्नुहोस् कि SEO सरल छैन। यो एक रातको प्रक्रिया छैन। प्रक्रिया सुरू गर्नु अघि, आवश्यक घटकहरूलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ। यसैले यो बुझ्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ कि गुगल कसरी काम गर्दछ र कसरी यसको एल्गोरिथ्मले काम गर्दछ।
Semalt डिजिटल सेवाहरूको ग्राहक सफलता प्रबन्धक, अलेक्ज्याण्डर पेरेसुन्कोले निम्न महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूको सहयोगमा एसईओ प्रदर्शनमा ML र AI को प्रभाव बताउँछ।
गुगल एल्गोरिथ्मको SEO को लागी सरल समय थियो। इन्टरनेट मार्केटिंग र SEO को लागी पुरानो समय दश बर्ष पहिले फिर्ता छ। "इन्टरनेट मार्केटिंग" शब्दले केहि आरक्षित गरेको छ जसले केवल फिसि,, स्पाम पोष्ट गर्दछ र उत्पादनहरू अनलाइन फेला पार्न खोज्छन्। यस अवधारणाले काम गरेको छ, र धेरै व्यक्तिहरूले केही दिनहरूमा कीवर्ड स्टफिंग, अप्रासंगिक लिंकहरू सिर्जना गरेर, र स्पाम पठाउँदै वेबसाइटहरू क्रमबद्ध गर्न सक्दछन्।
हाल, गुगल खोजी ईन्जिनलाई धेरै आईटमहरूमा विभाजन गरिएको छ। यो एकमात्र तरीका हो कि गुगल खोजी एल्गोरिथ्मले वेबको 70० ट्रिलियन + वेब पृष्ठहरू ह्यान्डल गर्न सक्दछ। यस सन्दर्भमा, गुगलले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग गर्दछ र एन्क तत्वहरू पत्ता लगाउन कृत्रिम बुद्धिको प्रयोग गर्दछ। गुगल द्वारा तपाईंको साइटलाई अनुकूलन गर्न प्रयोग गरिएको एक प्राविधिक भनेको क्रल गर्ने र अनुक्रमणिका गर्ने एक विधि हो। यसमा एक पृष्ठबाट अर्को पृष्ठमा साइटको आन्तरिक लिंकहरू ट्र्याक गर्न समावेश छ। वेबमास्टर वा साइट मालिकले निर्णय गर्न सक्दछ कुन गुगलले क्रल गर्न चाहन्छ। साथै, यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, तिनीहरू रोबोट्स.टी.टी.टी. सँग डिन्ड्याक्समा सम्पूर्ण साइट फेला पार्न सक्दछन्। एन्कर पाठ, लिंक, वा सामग्री प्रयोग गरेर गुगलले पृष्ठहरू क्रमबद्ध गर्न Googlebot प्रयोग गर्दछ। सूत्रहरू र एल्गोरिथ्म गुगल द्वारा प्रस्तुत अन्य चाखलाग्दो तरिकाहरू छन्। गुगलले उत्कृष्ट खोज परिणामहरू प्रदान गर्न सूत्रहरू र कार्यक्रमहरू लेख्छ।
एआई र एमएलले SEOलाई कसरी असर गर्छ?
सब भन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हो कि एआई र मेशिन शिक्षाले एसईओलाई सकारात्मक वा नकारात्मक रूपमा प्रभाव पार्दछ। बिभिन्न SEO विशेषज्ञहरु विषय मा विभिन्न विचार र दर्शनहरु प्रदर्शन गरे। सकारात्मक पक्षमा, व्हाइट-ह्याट एसईओ दृष्टिकोणहरू प्रयोग गर्ने साइट मालिकले स्वचालित रूपमा गुगल स्तर निर्धारण गर्नुपर्दछ। साइट अप्टिमाइजेशनको साथसाथै, Google ले प्रयोगकर्ताहरूका पुस्ताहरू संलग्न, साझेदारी गर्न योग्य र भयानक सामग्री हेर्न चाहन्छ। बाँकी प्रविधिको हेरफेर गर्नुपर्दछ। यसका साथै साइटलाई स्तर दिन केहि समय लाग्न सक्छ, तर प्राकृतिक रूपमा हुन दिनुहोस्। त्यसो भए, गुगलमा स्थिर र्याकिंग पाउनुहोस् र स्पामबाट बच्नुहोस्।
नकारात्मक पक्षमा, एआई र मेशिन लर्निंगले Google एल्गोरिथ्म, गुगल विकासकर्ताहरूलाई पनि बढाउन मद्दत पुर्‍याउँछ जुन ह्यान्डल गर्न वा राख्नका लागि गाह्रो हुन्छ। यस सन्दर्भमा, साइट मालिकहरूले Google लाई महत्वपूर्ण छनौट कारकहरूमा प्रयोगमा काम गर्नुपर्नेछ। विज्ञहरू तर्क गर्छन् कि साइट अप्टिमाइजेसन र एसईओ अन्ततः प्रारम्भिक अपेक्षित भन्दा बढी कठिन हुनेछ। थप रूपमा, यसको अर्थ जानकारी खोजी गर्न सजिलो प्रक्रिया हुन सक्छ। अनुरोध गरिएको जानकारी ती प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रस्तुत गर्न सरल छ जुन सर्च ईन्जिनहरूलाई उनीहरूले चाहेको जानकारी दिनको लागि धेरै संवेदनशील हुन्छन्। Google ले के चाहान्छ भन्ने कुराले फरक पार्दैन यदि एक साइटमा उत्कृष्ट प्रयोगकर्ता अनुभव र सामग्री छ। ग्राहकहरू खुसी र सन्तुष्ट हुनेछन्। सन्तुष्टि ग्राहकहरु कुनै पनि व्यवसाय को लागी एक उत्तम विचार हो।